Xarun fududeyneysa Adeegyada Caafimaadka ee Soomaalida oo Thailand laga furay • Horseed Media
You are here: Home / Business / Local businesses / Xarun fududeyneysa Adeegyada Caafimaadka ee Soomaalida oo Thailand laga furay
Dalka Tahiland ayaa markii u horaysay laga hirgaliyey adeega caafimadka oo si fudud kuugu sahlaya gaar ahaan dadka Soomalida ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan takhasuska daawaynta cudurada kala duwan ee ka jira dunida oo dhan.
Xaruntan cusub oo lagu magacaabo Alle- Megan medical and business assistance services ltd (AMMBAS)Thailand, ayaa u fududeynesa bukaanada doonaya in lagu sameeyo baadhitaano caafimaad oo dhamaystirani waliba ayidoo la adeegsanayo technologiyada casriga ee ku soo korodhay caafimaadka.
Maamulka sare ee adeega caafimaad allemegan ayaa horseedmedia u sheegay in dadka u sahlayo in ay si fudud u iman karaan iskuna daawayn karaan dalka Thailand, adeegaas oo dadka ka caawinayaan khuburo xeel dheerayaal ah oo si weyn ugu talax tegay baahidaada caafimaad, oo muddo dheer deganaa dalka Thailand kuwaas oo khibrad iyo waayo aragnimo dheer u leh shaqada ay qabanayaan.
Adeegaan caafimaad oo boqoli kiiba boqol aad ugu diirsaneyso hadii aad tahay bukaan ama aad dooneyso in aad hubiso caafimaadkaada, adigoo sameynayo baaritaanno caafimaad oo dhameystiran. adeegyada kala duwan ay kuu qabaneeyso allemeganwaxaa ka mid ah.
Qiimeynta bukaanka jiradiisa iyo ugudbinta isbitaalka takhasuska u leh jiradiisa inta uusan imaanin dalka Thailand.
Ka soo saarida isbitaalka hanaanka daaweyntiisa iyo waqtiga iyo qarashka ku baxayo (qiyaas ahaan).
Usoo saarida bukaanka dal ku gal caafimaad Usoo saarida dal kugal caafimaad qaraabada bukaanka ku wehliso safarkiisa.
Usii diyaarinta balamihii lakulanka dhakhtarka ee isbitaalka6. Usii qabashada/ usii buukimada meel ay degaan.
Soo dhoweyn diiran oo si lacag la’aan ah bukaanka iyo cidii wheliso looga soo qaadayo gegida diyaaradaha. Usii diyaarinta.
turjubaan soomaali ah dumar ama rag kii uu bukaanku u baahanyahay oo aad ugu tababa baran arimaha caafimaadka iyo.
ilaalinta ama xafidida sirta. Ka caawinta bukaanka wax alaale iyo wixii adeeg ah ee ow uga baahdo wadanka gudihiisa.
Wixii faah faahin ah oo intaas dheer kala xiriir:
Gudoomiyaha Alle megan: Cabdiraxmaan Caamir
Madaxa suuq geynta ee Alle megan: Cabdiqaadir Jibriil
Tel: : +66(0)892111693
Ama booqo www.allemegan.com